सङ्घर्षकै कारण सफल भए गायक रमेश नेपाली - DerbyKhabar
सङ्घर्षकै कारण सफल भए गायक रमेश नेपाली
पछिल्लो पुस्ताका उदयमान गायक,सर्जक तथा सङ्गितकार रमेश नेपालीसंग सहकर्मी दिनेश फुयालद्वरा रिएको साङ्गितिक भलाकुसारी…….
रमेशजि तपाईलाई स्वागत छ ! हिजो आज के काममा ब्यस्त हुनुहुन्छ ?
धेरै धेरै धन्यवाद दिनेशजि,हिजो आज गित सङ्गितमै ब्यस्त छु,निरन्तरता दिदै छु गित सङ्गितकै कामलाई कहिले रेकर्डिङ हुन्छ त कहिले सुटिङ हुन्छ।
सुरुका दिनहरुको बारेमा बताउनुहोस गायन छेत्रमा कसरी लाग्नु भयो ?
सुरुका दिनहरुको बारेमा बताउनु पर्दा निकै सङघर्ष गरेर आइयो। त्यो बेलाको दु:ख सम्झिदा अहिले सपना जस्तो लाग्छ। होटमा निकै समय भाडा माझियो।अहिले ति पहिलेका दिनहरु सम्झिदा आँसु आउँछ। खानाका लागि पैसा हुदैन थियो भोकभोकै त कति हिडियो।
कसरी यो क्षेत्रमा लाग्ने हौसला मिल्यो ?
सानै देखि गित गाउने रुचि अनि चाहना थियो। अरुका गितहरु धेरै सुन्थे।म्युजिक ट्र्याक बोकेर जान्थेँ स्कुलका प्रोग्रामहरुमा।गित गाउँने प्रतियोगितामा भाग लिने गर्थे। सधै गायनमा प्रथम पनि हुन्थे बिधार्थी जीबनमा म। अग्रज दाइहरु जस्तै: स्वरुप राज दाइका गित अनि शिव परियारका गितहरु निकै सुन्थे। राजेश पायल दाइ र अन्जु दिदीका गितहरु धेरै सुनेर गुन्गुनाउथेँ । उहाहरुकै क्रेजले पनि गायक बन्ने भुत चड्यो अनि एक दिन म पनि गायक,कलाकार बन्छु भनेर सङघर्ष गर्दै आज उनै दाइ दिदीका गित सुनेर आएको मान्छे म आज उहाहरु संग सहकार्य गर्ने भएको छु ।यहाँ सम्म आइ पुगेको छु। एउटा राम्रो गायक बन्ने प्रयास गर्दै छु।
पहिलेको गित सङ्गीत र अहिलेको गित सङ्गितमा के फरक देख्नु हुन्छ ?
धेरै अन्तर छ यसको बारेमा बोलेर साध्य नहोला।ठेट एक सब्दमा भन्नू पर्दा पहिलाको गितमा मौलिकता हुन्थ्यो अहिलेको गितमा मौलिकता छैन।उत्ताउला अनि अश्लील गितहरु आउन थालेका छन हिजोआज। यस्ता गितले नेपाली सङ्गितलाइ खाडलमा हाल्दैछन।
किन कलाकारिता क्षेत्रमा एक कलाकारले अर्को कलाकारलाई सम्मान गर्न जान्दैनन?
यो अत्यन्तै राम्रो प्रस्न गर्नु भयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद!
सम्मान गर्न नजान्नुको मुख्य कारण नै घमण्ड हो। 1/2 ओटा गित गाउँछन, म गायक हु भन्दै हिड्ने अनि मान्छे नचिन्ने यस्तै प्रकारको सोच भएको हुनाले एक कलाकारले अर्को कलाकारलाई सम्मान गर्दैनन र जसले सम्मान गर्दैन उ यो क्षेत्रमा धेरै समय टिक्दैन कुरा यति हो।
कस्तो खालको गित बढी गाउनु हुन्छ ?
मेरो खास बेस भनेको आधुनिक हो।सबै आधुनिक मात्र धेरै छन। तर सबै गित गाउछु र गाउन रुचाउछु पनि अफर आएका सबै किसिमका गित गाएको छु। अबका दिनहरूमा पनि गाउँने नै छु।
गायन बाटै बाच्न सकिन्छ?
आज सम्म म चाँही बाचेकै छु।सबै यहि सङ्गितमा अडिएको छ जीवन।आजा सम्म अरु कुनै पेशा गरेको छैन।यहि गित सङ्गित नै हो बाच्ने आधार । मेरो आफ्नै2वटा स्टुडियो पनि छ,सगरमाथा म्युजिक प्राली 1 र2स्टुडियो पनि चलाइ राखेको छु। पैसा धन सम्पतिको पछाडि भन्दा पनि कामको पछाडी लाग्ने मान्छे हुँ। काम राम्रो गरेपछि जुन क्षेत्रमापननि बाँच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र म सङ्गीत क्षेत्रमा आज सम्म खुसिसाथ नै बाचेको छु।
कस्तो गायक बन्न मन छ ?
मलाई भाइरल गायक हुनु छैन। म नेपाली गित सङ्गितका सदाबहार गायक बन्ने कोसिसमा छु ।क्षेणिक पैसा खर्च गरेर “अटो टिउनमा” गित गाएर स्वर राम्रो बनाएर मलाई भाइरल बन्नु छैन सदबहार गायक बन्नु छ र त्यसकै लागि कोसिस जारी नै छ मेरो आज सम्म पनि।
गायन बाट कत्तिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ ?
अत्यन्तै सन्तुष्टि छु,आफ्नो क्षेत्रनै यहि हो।आफ्नो चाहाना नै यहि भएको हुनाले सन्तुष्टि नहुने त कुरै छैन।
आधुनिक गित कस्तो होस जस्तो लाग्छ ?
हिजोआजका आधुनिक गित पनि बिग्रिदै गाएको छ।हरेक गितमा मौलिकता होस समय सान्दर्भिक होस सबैको मनमा बसोस सबैले सुन्ने खालको होस जस्तै लाग्छ आधुनिक गित मलाई।
पछिल्लो योजना के बनाउनु भएको छ ?
म धेरै योजना बुन्दिन, योजना बुनेर अगाडि बढ्ने गायक पनि होईन। म अब सङ्गितमै हुन्छु रेकर्डिङ धेरै हुन्छ मैले गाउनु पर्ने कम्पोजिसन धेरै आउँछन,अब त्यसैमा ब्यस्त हुन्छु। एल्बम रिलिजको तयारीमा थिएँ कोरोना भाइरसको असर त्यस्मा पनि पर्न गयो फेरि निरन्तरता दिन्छु र सङ्गितमै रहिरहने छु।
अब नयाँ आउने कलाकारलाई तपाईंको सुझाब ?
नयाँ आउने कलाकारलाई म यो भन्न चाहान्छु कि सङ्गित क्षेत्रमा केही गर्छु नाम कमाउछु राम्रो काम गर्छु भनेर आउनेलाइ सिकेर आउनुस बुझेर आउनुस सङघर्ष गर्न आउनुस तर सिकेर बुझेर आउनुस।
अन्तमा आफ्ना श्रोता ,दर्शक र सुभ-चिन्तकलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
डर्बीखबर डट कम र दिनेश-सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद ! मीठो कुराकानी गर्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि सदैब आभारी हुनेछु। अन्तमा मेरा प्राण प्रिय दर्शक स्रोता अनि शुभचिन्तकहरुमा फेरि पनि नमस्कार। म यहि क्षेत्रमा जिबन्त हुन्छु।हजुरहरुको मायाको आबस्यक छ माया गरि दिनु होला। सहयोग र साथको अपेक्षा राख्दै अगाडि बढ्छु धन्यवाद।